"Ary Jesosy nilaza fanoharana taminy, fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Lioka 18:1 Mahareta amin’ny fivavahana, ka miambena amin’izany amin’ny fisaorana. Kolosiana 4:2 Raha mivavaka, dia midira ao amin’ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao, dia mivavaha amin’ny Rainao." Matio 6:6
Aleo amina toerana milamina no mivavaka, kanefa azo atao koa ny mivavaka amin’ny fotoana rehetra sy toerana rehetra. Andriamanitra no hatonintsika ifampiresahana. Eo Izy, eo anilantsika, toy ny Ray mihaino antsika. Aoka isika hiresaka aminy, na miteny mafy na ao am-po, araka ny fombantsika tsotra fotsiny. Aoka ny vavaka ataontsika ho avy ao anatintsika lalina indrindra, an-kitsimpo; tokony hipololotra avy ao am-po ny vavaka.
Ny vavaka dia tsy fitanisana filàna ara-panahy na ara-nofo, fa raha ny marimarina kokoa, dia fifampiresahana vokatry ny fifandraisana feno fahatokiana amin’Ilay Andriamanitro, amin’Ilay Raiko. Mety hanana endrika samihafa ny vavaka, arakaraka izay ambarako amin’Andriamanitra. Ohatra :
- «mitsaoka»: miaiky ny halehibeazan’Andriamanitra, izay efa hita ao amin’ny zavaboary, ary mainka ao amin’ny asan’i Jesosy Kristy;»
- «miaiky»: miaiky amin’Andriamanitra ireo fahotantsika, miaiky aminy izay rehetra fahadisoana, tsy misy afenina;
- «misaotra»: misaotra amin’izay rehetra omen’ny Tompo, na dia izay toa ara-dalàna aza;
- «mangataka»: milaza am-pahatsorana izay ilaintsika, izay manahirana antsika;
- «mivavaka ho an’ny hafa»: mangataka ho azy ireny;
- «mihaino»: tsy resak’olon-drery eo anatrehan’Andriamanitra tsy akory ny vavaka. Ny hoe mivavaka dia mitoetra mangina ihany koa, mihaino ny valinteny avy amin’Ilay Andriamanitsika -tsy hoe miteny ho ren’ny sofina Izy, fa ny Fanahy Masina no «miteny» amin’ny fanahin’ny kristiana, mandritra ireny fotoana milamina ihaonana amin’Andriamanitra ireny. Miteny amintsika ihany koa Andriamanitra, ary indrindra amin’ny alalana andinin-tSoratra Masina mety ho tonga ao an-tsaina, na koa, mazava ho azy, rehefa mamaky Baiboly. Tsara raha mahafantatra azy io!